Fanjonoana - Torolàlana WoW | WoW Guides
Mialà sasatra amin'ny fanjonoana tsara tarehy, na mitety morontsiraka mampidi-doza indrindra amin'ny fikarohana trondro tadiavina ... na zavatra hafahafa very any ambanin'ny ranomasina.
Ilay mpihaza mahavariana - Mianatra amin'ny tsara indrindra
Salama daholo indray. Sibê, Mpanarato Tomponao avy any GuideswoW aho, ary eto aho anio hanazava ny fomba hahazoana ...
Torolàlana momba ny jono legiona
Salama daholo, Sibê aho, Master Fisher-n'i GuiaswoW. Andro vitsy lasa izay dia nikaroka momba an'io asa mahafinaritra io aho ...
Mpihaza tratra: mpanjono tsara indrindra
Salama daholo, ry mpanarato malala, Sibê aho, ny mpanjono tsara indrindra any GuiaswoW nefa tsy nahatratra «Ny mpanjono tsara indrindra». Atsinanana…
Artifact Fishing in Legion - Ahoana no fomba ahazoana azy
Tena tsara ry mpanjono malalako, Sibê aho, Mpanarato Tomponao amin'ny GuideswoW ary anio dia tiako ny hizara aminareo rehetra ity ...
Torolàlana momba ny jono 1-450
Amin'ity torolàlana ity dia hanazava ny fomba hampiakarana ny haavon'ny jono izahay amin'ny 1 ka hatramin'ny 450 ao anatin'ny 11 na 12 ora. Tsy tsara ny hanaovana izany amin'ny fotoana iray satria mety hanimba anao manokana Fahasalamana.
Ny fomba ampianarantsika an'ity boky ity dia mampihena ny fotoana. Ny ankabeazan'ny trondro azonao dia trondro tsy misy ilana azy fa ao amin'ny Patch 3.1 ny fiovana mahaliana amin'ny fanjonoana amin'ny toerana rehetra na dia tsy manana fahaiza-manao aza ianao dia nampidirina, raha jerena mazava ho azy fa tsy misy zavatra mahaliana tratra.
Patch 3.1: Fiovana vaovao amin'ny jono
Ny fanovana vaovao amin'ny asa jono dia ampiana ao amin'ny Public Test Realms Patch 3.1.0: A…